Mitondra Fanantenana Sy Fanasitranana Any Palestina Ny ‘Faribohitra Miloko Marevaka’ Ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2015 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, عربي, Türkçe, Deutsch, Ελληνικά, Български, русский, Nederlands, 日本語, English
Fantatra amin'ny anarana hoe “faribohitra miloko marevaka i Al Zaytoun ao Gaza (Source: Ivontoerana misahana ny Fahatakàrana Ny Afovoany Atsinanana, IMEU)
Tonga tahàka ny bokin-jaza tiana indrindra ity tantaran’ny fiainana tena nisy ity. Fantatra amin'ny hoe “faribohitra miloko marevaka”, nolokoina amin'ny endriny falifaly i Al Zaytoun ao Gaza.
Mohammed Al Saedi no mpanakanton’ny tantara, olona manana vina sy aingam-panahy, izay nanomboka ny tetikasa tao an-tranony tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Niaraka tamin'ny fanampian'ireo mpirotsaka an-tsitrapo, naparitaka teny amin’ny arabe ny loko mandra-pandravaka ireo trano 30 tsy lavitra teo. Rakotra zaridaina mitsangana ao anaty efajoro mamirapiratra ny rindrina ao Al Zaytoun, sary amin'ny rindrina misy sambo mandeha mandritry ny mody masoandro, ary sarisary voaloboka mandady izay manodidina ny zoron’ny trano.
Milaza ny Al Jazeera fa ny fianakaviany no nanomboka ny fambolena zaridaina an-drenivohitra tamin'ny argula, baranjely, voatabia, ary pasiteky ka nanampy loko maitso, mena sy volomparasy ny avana an-drenivohitra.
Nitantara ny antony nanosika azy tamin’izany i Al Saedi, ka nilaza hoe:
Miteraka faharavàna ny ady, miampy ny vokatry ny fahirano, miteraka hakiviana, fanaintainana ara-tsaina no vokany rehefa ela ny ela. Noho izany, te-hamorona tontolo tony feno voninkazo sy loko aho mba hiezaka hanasitrana ny fijaliana sy ny vokatra ara-tsainan’ny fahirano. Miainga avy amin'ireo vaton'ny fharavàna, raha sitrapon’Andriamanitra, hanorina zaridaina sy dobo feno voninkazo ary loko mampitony izahay.
Ny fandrakofana nataon’ny Global Voices ny ady nandritry ny 50 andro teo amin'i Isiraely sy Gaza tamin'ny volana Jolay sy Aogositra 2014 no nitatitra fa manodidina ny 40 isan-jaton’ny tanàn-dehibe ao Gaza no rava, anisan'izany ny trano 96.000.
Ny Ivontoerana Tamerv misahana ny Fanabeazana ny Vondrom-piarahamonina, izay ao Ramallah, Palestina ny foibeny, no namatsy vola ny famerenana amin'ny laoniny an’i Al Zaytoun. Araka ny tranonkalam-pifandraisany, miasa ao Gaza sy Cisjordanie io O.N.G. io, amin’ny fampiroboroboana ireo tetikasa fanavaozana ara-kolontsaina, ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny ankizy amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra tia mamorona.
Nanampy i Maram sy Asmaa Haddad, 9 taona sy 10 taona, mponina ao amin’ny faribohitra, ka nilaza hoe:
Tsapanay tena faly izahay rehefa nolokoin’izy ireo ny faribohitra. Lasa tena tsara tarehy, ary mahatsapa fifaliana izahay rehefa milalao ao, fa tsy toy ny teo aloha.